Iminyaka engama-75 yesihlanu, isaga yabantwana bakaEnid Blyton | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi zoLutsha
EyoMsintsi 11, eyadlulayo 75 iminyaka i-adventure yokuqala yenye ye-sagas edumileyo yoncwadi lwabantwana nolutsha kuluncwadi. Yayiyiyo leyo Ezintlanu kunye nobutyebi besiqithi. Kwaye kwakhona, kuzalisekisiwe kulo nyaka Isiphelo 120 ukuzalwa komdali wayo, umbhali obalaseleyo wase-Bhritane Enid Blyton.
Ipapashwe ngaphezulu kwe Iilwimi ezingama-90, Las iintlelo, ukuphinda kwenziwe uhlengahlengiso Umabonwakude wolu ngcelele lweencwadi akanakubalwa. Khange babekho ukhululwe kwimpikiswano kumaxesha akutshanje. Kodwa i izizathu impumelelo yayo isenamandla kwaye yiyo loo nto phantse isiqingatha sesigidi seekopi zisathengiswa ngonyaka.
En Ezintlanu kunye nobutyebi besiqithi Bazalwana UJulian, uDick, uAna kunye nomzala wabo uGeorgina kunye nenja yabo uTim chitha ihlobo ukhangela ubuncwane kwaye ufumanisa iimfihlo eziliwaka kunye nenye kwi Isiqithi saseKirrin. Yiyo le ndlela ubuhlobo buya kukhula ngayo buya kukhula bomelele kwinto nganye entsha.
Y njengokuba zinjalo Abahlanu? Kulungile UJulian yeyona inkulu kwaye inde, smart kunye noxanduva. Dick mhlawumbi yeyona nto krwada kwaye isidlele, kodwa naye ulunge kakhulu. ana, omncinci ukhathalela i Umsebenzi wasekhaya kwenziwe ntoni. Y Georgina ndifuna ukuba njengenkwenkwana kwaye ukhetha ukubizwa Jorge. Ukwangoyena ukhaliphileyo. Y timEwe kunjalo, yinja kaGeorge, okhaliphileyo njengaye kwaye ethanda wonke umntu.
1 Izizathu zokuba sizithande
2 Uthotho lonke
3 Uhlengahlengiso kumabonakude
4 Umboniso werhafu ePortugal
Izizathu zokuba sizithande
Kwaye sisabathanda kuba:
Safunda ukufunda nabo. Kwaye izizukulwana ezitsha ziyaqhubeka nokwenza njalo.
Sihlola okokuqala. Kwindalo, kwiindawo eziyimfihlakalo, emiqolombeni nakwiindawo ezikude, izindlu ezishiyiweyo ezineendlela ezifihlakeleyo ezingaphezulu kwesinye.
Sifumana indlela yokuthanda nokunyamekela izilwanyana. Ngubani ongafuni ukuba nayo inja efana nexesha, liqabane elingadinwayo leza?
Sitye zonke iipie zenyama Yehlabathi, iisendwitshi zesonka esithambileyo, iisendwitshi, iisarsaparrillas okanye iilamonade.
Kwakungekho bantu badala unikezela ngetoti ngemithetho, uxanduva okanye uxanduva. Babonakala nje ukuba balungiselele abo batyebileyo kunye nokutya okuninzi okanye ukutya. Abahlanu banokwenza into abayifunayo ngaphandle kokuba babe semva. Kwaye saziva sikhululekile njengabo. Kodwa basifundise ukuba noxanduva lweziqu zethu kwaye sifunde iziphumo ezinokuthi zibe nezenzo zethu.
Los Iimpikiswano zazizigqibile, kodwa babehlala benazo zokuziphatha (okanye isimilo, kwimeko yangoku) kwaye uhlala egcina ukuthandabuza. Ewe, abantu ababi bahlala belahleka kwaye abantu abalungileyo bahlala bephumelela. Ngamaxabiso ukuqaqambisa ngoluhlobo ubuhlobo, ukuthembeka, umgudu nentsebenziswano nantoni na enokwenzeka.
I-Five and the Treasure Island (ngo-1942)
Olunye uhambo lwesihlanu (1943)
Abahlanu bahamba (1944)
Abahlanu kwiSmuggler's Hill (1945)
Abahlanu kwiKharavani (1946)
Abahlanu kwakhona kwiSiqithi saseKirrin (ngo-1947)
Abahlanu baya ekampini (1948)
Abahlanu basengxakini (1949)
Abahlanu ebusweni be-adventure (ngo-1950)
Impelaveki yesihlanu (1951)
Abahlanu banexesha elimnandi (1952)
Abahlanu ngaselwandle (1953)
Abahlanu kwiLizwe eliMangalisayo (1954)
Abahlanu baNwaba (1955)
Abahlanu ngasemva kwendinyana eyimfihlo (ngo-1956)
Abahlanu kwiBillycock Hill (1957)
Abahlanu kwiFama yaseFinniston (1960)
Abahlanu kwiDwala likaMtyholi (1961)
Abahlanu kufuneka basombulule iqhina (1962)
Abahlanu Baphinda Baphinda (1963)
Eyona idumileyo (kwaye enye esiyibonileyo) yayingu Uthotho lwaseBritane 1978 ngeziqendu ezingama-26 kumaxesha ama-3, enamazwi UEnrique noAna kulungelelwaniso lwengoma yesihloko. Kwakukho enye kamva 1996Imveliso yobambiswano yase-UK, Canada ne-Jamani. Kwakhona ngeziqendu ezingama-26 kumaxesha ama-2.
Umboniso werhafu ePortugal
Isuka kwi Julayi 24 ukuya ku-Okthobha 7 ilizwe elingummelwane libonisa kwi I-Biblioteca Nacional de Portugal, kwi Lisboa, umboniso ngokuchanekileyo malunga nesi siganeko. Isihloko, U-Enid Blyton (1897-1968): iminyaka engama-75 yesihlanu, uphonononge ubomi nomsebenzi walo mbhali ngokubanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Iminyaka engama-75 yesihlanu, isaga yabantwana yakudala kaEnid Blyton